INepal Road Transport-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>EzokuThutha Emgwaqweni Wezizwe>Ezokuhamba ngomgwaqo waseNepal
Ngokuphendula ngokugcwele "ekuthuthukisweni kwaseNtshonalanga" kwekomidi eliphakathi le-CPC, uhlelo lwe "One Belt And One Road", i-SHL ilungisa ukuhlelwa kwamasu ezinkampani futhi iqale ukuhlinzeka insizakalo entsha yokuhamba ngomgwaqo emazweni aphesheya eNepal.
Imvamisa ihanjiswa eKathmandu, inhloko-dolobha yaseNepal iya kuyo yonke insimu yaseNepal nge-Jilong port kanye neZhangmu echwebeni laseTibet lisuka kulo lonke elaseChina.
Ingabe ichweba le-zhangmu ne-jilong echwebe ngamaphiko aphezulu？
Ukuphakama okujwayelekile eTibet kungaphezu kwamamitha ayi-4000. Abashayeli nezimoto ezisuka e-Mainland azikulungele ukufinyelela ngqo echwebeni. Uma kucatshangelwa leli phuzu, abakwaSohologistics bamisa ezinye izinto zokugcina izimpahla eXining esifundazweni saseQinghai, eLanzhou esifundazweni saseGansu naseLhasa eTibet bezoshintshana nezimoto ezifanelekile ethafeni lelo futhi bahlelele abashayeli abanamakhono abasebenza kulo msebenzi wokushayela amathafa.
Kungenzeka yini ukulethwa kwendlu ngendlu eNepal?
Ama-Sohologistics ahlinzeka ngomgwaqo owodwa ohamba ngomgwaqo oya ebhizinisini laseNepal usuka kulo lonke elase China ngechweba laseJilong noma ngeZhangmu ngokuthwala cargos okujwayelekile, nokushintshwa kokulayisha, ukuqapha ukulayisha
Hlobo luni lwezimpahla olufanele ukuthuthwa kwemigwaqo yamazwe omhlaba ukuya eNepal?
Njengamanje (ngo-2019), ngaphandle kwezokuThutha, kuneziteshi ezimbili kuphela ezisuka eChina ziya eNepal, ezokuhamba ngomgwaqo kanye nokuthunyelwa kwasolwandle namaloli (lokho kuthumela echwebeni laseCalcutta bese lilayisha esiteshini saseNepal) kanye nezokuthutha zomgwaqo zomhlaba jikelele. okokusebenza kwesiteshi samandla kagesi, imishini yobunjiniyela, i-crane, amaloli e-forklift, izinto zokwakha, ukudla, imisebenzi yezandla, izinsiza zansuku nokunye nokunye kufanelekile ezokuthutha zomgwaqo zomhlaba wonke eziya eNepal ngokusho kwesipiliyoni sokusebenza kweSohologistics.
Ungasenza kanjani isimemezelo senkambiso, ukuhanjiswa kwamasiko kanye nokuvunyelwa kwesiko lokuhamba ngomgwaqo kwamazwe omhlaba ukuya eNepal?
Kwezokuhamba eMgwaqweni eziya eNepal, kuvame ukwenza isimemezelo ethekwini elithumela kwelinye izwe Futhi wenze imvume echwebeni lomngcele noma ePOD eNepal.
Yimuphi umshini osetshenziselwa ukuthutha umgwaqo omkhulu oya eNepal?
Kuthiwani ngomthethosivivinywa wokulayishwa kwezithuthi zomgwaqo eziya eNepal?